[कथा] भट्टीपसलमा उमिरहेकी बूढी
२६ असार २०७७ शुक्रबार Friday, July 10, 2020
KATHMANDUTemperature 22°CAir Quality57
फूलमायाको भट्टीपसल सुनसान थियो । बम्बैबुढी भट्टीबाहिर राखेको स्टुलमा बसेर उमिरहेकी थिई । उसका दुवै आँखा बन्द थिए । उसको टाउको पुरानो जमानाको घडीको लङ्गुरझैं लगातार हल्लिरहेको थियो । उसको स्थिति हेर्दा लाग्थ्यो, ऊ कुनै बेला पनि लडेर भुइँमा पछारिन्छे ।
१३ मंसिर २०७६ शुक्रबार
गल्पकार त्यहाँ पुग्दा फूलमायाको भट्टीपसल सुनसान थियो । बम्बैबुढी भट्टीबाहिर राखेको स्टुलमा बसेर उमिरहेकी थिई । उसका दुवै आँखा बन्द थिए । उसको टाउको पुरानो जमानाको घडीको लङ्गुरझैं लगातार हल्लिरहेको थियो । उसको स्थिति हेर्दा लाग्थ्यो, ऊ कुनै बेला पनि लडेर भुइँमा पछारिन्छे ।
बम्बैबुढीको फुक्क फुलेको कालो अनुहारको अगाडि एउटा झिङ्गा वर्तुलाकार परिधिमा उडिरहेको थियो । झिङ्गा उसको थेप्चो नाकको टुप्पामा बस्न खोजिरहेझैं लाग्थ्यो तर उसको हल्लिरहेको टाउकोले झिङ्गाको मुराद सम्भव भएको थिएन । झिङ्गा रिसाएको जस्तो देखिन्थ्यो ।
त्यस बिहानसम्ममा बम्बैबुढीले चौसठ्ठी वर्ष, केही महिना र केही दिन पारगरिसकेकी थिई । बुढ्यौली जनाउने उसको सेतो कपाल फूलमायाले भर्खरै उसिनेको चाउमिनजस्तो देखिएको थियो, जो भट्टीपसलको टेबुलमाथि थियो । चाउमिन र उसको कपालमा अरू पनि समानता थिए । चाउमिन जसरी गुजुल्टिएको थियो, उसको कपाल पनि त्यस्तै थियो । र, लम्बाइ पनि झन्डै समरूप थियो । उसका हात खस्रा न खस्रा थिए । खुट्टा पटपटी चिरिएका र नाङ्गा थिए ।
बम्बैबुढीले रङ खुइलिएको मैलो फरिया र चोलो लगाएकी थिई, रातो र कालो बुट्टा भएका । नाकमा सेतो सुनको फुली थियो । कान बुच्चै थिए । कानको लोतीमा पहिले छेडेका प्वालका डोबहरू स्पष्ट देखिन्थे ।
बम्बैबुढी र उसको मुहारवरिपरि रिङिरहेको झिङ्गा देखेर गल्पकारको मन हल्लियो । ऊभित्र एक किसिमको ऐठनको भूत पस्यो । त्यसपछि उसले बम्बैबुढी र झिङ्गालाई हेर्न सकेन । ऊ स्वच्छन्दतावादी–प्रकृतिप्रेमी कविझैं पसलअगाडिको दृश्यतर्फ एकोहोरियो ।
भट्टीपसल गाउँको पुछारमा थियो । त्यसपछि गाउँ सकिएर फाँट शुरु भएको थियो । गाउँ केही मात्रामा भिरालो धरातलमा बसेको थियो । उत्तरदेखि दक्षिणसम्म पसारिएको । पुरानो गाउँ केही माथि थियो भने बस्ती बढ्दै गएपछि बनेको नयाँ गाउँ तलतिर विस्तार भएको थियो । अहिलेसम्म पनि घर र टहराहरू बनिरहेको नयाँ गाउँको जमिन एक दशकअघिसम्म खुला खेत र बारी थियो । केही वर्षयता भट्टीपसलभन्दा दक्षिणको जमिनमा किनबेच चलिरहे पनि त्यहाँ अझै धानैधानको हरियो फाँट थियो । पसलको दुई किलोमिटर पर पूर्व मनोहरा नदी थियो तर अचेल गाउँको कुनै पनि भागबाट नदी दृष्टिगोचर हुँदैनथ्यो । नदीको गर्भ निचोरेर अन्धाधुन्ध बालुवा चोरिएको कारण त्यसको फैलावट खुम्चिँदै गएको र गहिराइ पनि बढ्दै गएको थियो ।
बस्ती बढेर खेतीयोग्य जमिन घट्दै गए पनि बाँकी बचेको फाँट अझै फराकिलो थियो । फाँटको ठीक बीचबाट नदीले बनाएको डोबजस्तो नागबेली परेको कच्चीसडक थियो । त्यो सडकमा हिउँदमा मात्र सवारीसाधन चल्थे । वर्षायाममा सडक सुनसान रहन्थ्यो । त्यस अवधिभरि त्यहाँबाट मानिस र वस्तुभाउ मात्र आवतजावत गर्थे ।
खेतमा काम गर्न आएकाहरू, बिहानको भ्रमणमा निस्केकाहरू र गाउँको तल्लो भेगका बासिन्दाहरू भट्टीपसलका ग्राहक हुन्थे । पसल अझै त्यति जमेर चलिसकेको थिएन । त्यो केही महिनाअघि मात्र खुलेको थियो । पसलकी मालिक्नी फूलमायाको लोग्ने वैदेशिक रोजगारीमा कतारतिर गएको थियो । उसले त्यहाँ काम गरेर कमाएको पैसा फूलमायालाई महिनैपिच्छे पठाउँथ्यो । लोग्नेले कतारबाट पठाएको पैसा जम्मा पारेर उसले तीन आना जमिन किनी र त्यहाँ एउटा टहरोरूपी आकृति उभ्याई ।
भट्टीपसल सम्पूर्णमा एउटा जस्ताले छाएको छाप्रो थियो, जसमा जम्मा दुई कोठा थिए । पसलखण्ड र भित्रको भाग । भित्री भागमा फूलमाया र उसका ससाना दुई छोरा बस्थे । उसका छोराहरू अझै सुतिरहेका थिए ।
टहरोको नयाँपन त्यहाँ पुग्ने ग्राहकले चाल पाइहाल्थ्यो, भित्तामा लगाइएको सिमेन्टको ओस र गन्धले । तर, गल्पकारचाहिं सिमेन्टको गन्धले भन्दा पनि पेन्डुलमझैं लगातार झुलिरहेकी बम्बैबुढी र महाकालझैं उसको मुहारमा घुमिरहेको झिङ्गा देखेर बढी आक्रान्त थियो ।
“यी बूढी बज्यै लड्छिन् कि कसो !”, आत्तिएको भावमा गल्पकारले फूलमायालाई भन्यो । पसलको भित्तामा टाँसिएको टेबुलमाथिको ग्यासचुलोमा आलु उसिन्न कुकर बसाल्दै गरेकी फूलमायाले पुलुक्क गल्पकारतिर हेरी । ऊ विकासे नश्लको सुँगुरझैं थलथल मोटी र हाँडीको पींधझैं काली थिई । उसले लगाएको पाइन्ट र टीसर्ट उसको शरीरमा टिमिक्क टाँसिएका थिए । खास गरी उसका छाती र नितम्ब सामान्यभन्दा भद्दा र धेरै ठूला देखिन्थे ।
बूढी लड्छे कि भन्ने गल्पकारको डरको जवाफ फूलमायाले दिइन ।
“यिनी लडिन् भने त टाउको फुट्न पनि सक्छ ।”, गल्पकार फेरि करायो ।
“आऽ के लड्थी अङ्कल ! यो त चुम्बक हो, चुम्बक ! देश खार शेष भकी चुम्बक ! नामै बम्बैबुढी !”
थसुल्ली फूलमायाको जवाफ गल्पकारलाई मन परेन क्यारे ! उसले नाक खुम्चायो तर प्रकटमा केही भनेन ।
गल्पकार बम्बैबुढीसामुन्ने तर विपरीत दिशाको स्टुलमा बस्यो र फूलमायालाई चिनीबिनाको एक कप चिया बनाउन भन्यो । ऊ आममध्यमवर्गको मानिसझैं चिनीको रोगी थियो ।
“साह्रै हरिप पो त छे यो बूढी ! रातभर खोलाको बालुवा चोर्छे । अनि दिनभरचाहिं यस्तै हो, यहाँ आएर उमिरहन्छे । अब त दिक्क पारिसकी अङ्कल यो राक्षेसनीले !”, फ्रिजबाट तुलसा डेरीको दूधको पोको झिक्दै काली थसुल्लीले भनी । त्यसपछि ऊ चिया पकाउने डेक्ची लिन भनी भाँडा माझ्ने चौकीतिर लागी ।
“राति मात्र चोर्ने ? दिउँसो मिल्दैन ?”
“दिउँसो त पुलिसले समात्छ नि अङ्कल !”
“पुलिसले दिउँसो मात्र किन समात्छ ? राति छुट दिन्छ ?”
“त्यत्ति पनि था छैन अङ्कललाई ? खोलाको बालुवा सर्खारको सम्पत्ति हो रे नि त !”
“त्यो त सरकारको सम्पत्ति हो तर सरकारको सम्पत्ति दिउँसो चोर्न रोक लगाउने र राति चोर्नलाई चाहिं छुट दिने हुन्छ र ?”
“पुलिसहरू राति सुत्छन्, त्यस बेला यो चोर्न जान्छे । अनि दिउँसो यो सुत्छे, पुलिसहरू आफ्नो डिप्टी गर्छन् । यो एक किसिमको लुकामारी खेलजस्तै त हो अङ्कल !”
“ए तेसो पो ? सत्य सेवा सुरक्षणम् !”
गल्पकार र फूलमायाबीचको संवादले बम्बैबुढीको उम्ने क्रममा कुनै व्यवधान आएको थिएन । लाग्थ्यो, ऊ अर्कै संसारमा थिई । ऊ लगातार उही रफ्तार र उपक्रममा हल्लिइरहेकी थिई ।
बिहान छिप्पिँदै थियो तर आकाशमा धुम्मिएको बाक्लो बादल अझै चुपचाप थियो, मानौं उसको आवाज कसैले लुटेको थियो । जहरसिंपौवाको थाप्लोमाथिबाट आउने सूर्य पनि बादलको सिमाना नाघेर यता आउन सकेको थिएन । कच्चीसडकको दुवैपट्टि खेतमा तीन फिटजति अग्ला धानका बोट गत रातको निद्राबाट अझै ब्युँझेका थिएनन् । मटमैलो उज्यालोमा तिनीहरू अझै लट्ठ र स्थिर देखिन्थे ।
अल्छी धानका बोटहरू हुँदै गल्पकारले झन्डै एक किलोमिटर परसम्मको सडकमा हेर्‍यो, जहाँ एउटा चरोमुसोसम्म देखिएन । खासमा गल्पकार बोडेतिरबाट आउने कुनै एक खर्पनेलाई कुरिरहेको थियो । यो मौसममा खर्पनेहरू साग र अन्य तरकारीको बीउ बेच्न त्यही बाटो भएर यता आउँथे र माथितिरको बस्तीमा जान्थे ।
“आज यताबाट खर्पनेहरू गए नानी ?”, गल्पकारले थसुल्लीको छातीमा हल्लिरहेका दुई भद्दा स्तनतर्फ आँखा गाडेर सोध्यो ।
“था भएन त अङ्कल !”
“मलाई काउलीका बेर्ना चाहिया थ्यो ।”
“काउली रोप्ने बेला भो र अङ्कल ?”
“भदौको दोस्रो हप्ता भैसक्यो, अब पनि अल्छी गरे पछि के खानु !”
“अझै मुसलधारे पानी पर्न रोक्या छैन । हिजो राति खहरेमा आको बाढीले उताको तरकारी फाराम बगाएछ । रायोको बेर्ना राखेको ब्याड पनि पुरेछ । टनेलभित्र लगाको गोलभेंडा पनि चुर्लुम्मै डुबेछ । हिउँदे तरकारी त अलि पानी पर्न कम भएपछि लाउने हैन र अङ्कल ?”
गल्पकारले फूलमाया थसुल्लीको प्रश्नको जवाफ नदिंदै भट्टीपसलमा एउटा सत्तरी वर्ष नाघेको बूढो मानिस पाइलट चुरोट फुसफुस फुक्दै आइपुग्यो र सामुन्ने उमिरहेकी बम्बैबुढीलाई एकपल्ट क्रूरतापूर्वक घुर्दै अर्को छेउमा गएर बस्यो । ऊ गल्पकारभन्दा लगभग बीस वर्षजति जेठो थियो । उसले खैरा कमिजसुरुवाल र कालो इस्टकोट लगाएको थियो । टाउकोमा खजमजिएको पुरानो ढाकाटोपी थियो । खुट्टामा तलुवा खिइएको चप्पल थियो । उसको अनुहारमा चाउरीका अनेक राजमार्ग देखिन्थे । नियमितजसो रक्सी खानाले उसका चिम्से आँखाका दुवै डिल सुन्निएका थिए ।
उसले खाइरहेको चुरोटको गन्ध ह्वास्सै गल्पकारको नाकभित्र पस्यो ।
“ए बाजे ! यो उमेरमा अब चुरोट छोड्नोस् ! दमको रोगी हुनुभयो भने ?”, गल्पकारले ठालुपोजमा उपदेश दिन खोज्यो ।
“होस् हाइ सार, चुरटको पिर नागार ! आबा काति नै बाँच्नु छा रा यो ज्यानले ? दुईचार वार्षा ता बाँचिएला हुइ !”
“जे भए पनि बाँचुन्जेल जिउलाई तकलिफ नभए राम्रो हैन र ! दमको रोग लाग्यो भने त बाँच्न पनि साह्रै सकस पो हुन्छ त बाजे ! बरु खान जान्यो भने चुरोटभन्दा त रक्सी जाति हुन्छ भन्छन् ।”
“यो ता पच्चीसै आना ठीक हो सार !”
त्यसपछि ऊ थसुल्लीतिर फर्कियो र भन्यो, “लौ हाउ फूलमाई ! यी सारको सल्ला आच्छा छाइना ता ?”
थसुल्लीले कुरा बुझी र मुसुक्क हाँसी । उसले पसलको कुनामा राखेको टेबुलमाथिको प्लास्टिकको जगबाट स्टिलको गिलासमा रक्सी खन्याई र बूढोको अगाडि राखिदिई । हावामा रहेको चुरोटको धुवाँसित रक्सीको गन्ध थपियो । गल्पकारले फेरि नाक खुम्च्यायो ।
त्यसपछि गल्पकारको चिया आइपुग्यो । उता बम्बैबुढी उस्तै हालतमा थिई, लगातार उमिरहेकी र हल्लिइरहेकी ।
एक गिलास रक्सी स्वाट्ट पेटमा हुलेर बूढो उठ्यो । यसपल्ट उसले निदाइरहेकी बम्बैबुढीलाई एक आँखाले पनि हेरेन । उल्टै अर्कोतिर फर्केर खोक्यो र सडकमा पुग्नेगरी थुक्यो ।
“लु है फूलमाई, आइराकको पइसा मेरो खातामा लेख्देऊ ! लु ता सार बिदा पाम् । यहाँ बासेर फिरी कस्ले खाना दिन्छ रा !”
“आज कहाँ काम छ नि मङ्गलेबाजे ?”, फूलमायाले सोधी ।
“उइ ता हो ठिक्दारको नुन । आजा ढालान्को काम् छा भान्थ्यो क्यारे !”
त्यसपछि फूलमायाले केही भनिन । बूढो अर्को पाइलट चुरोट सल्काउँदै माथि गाउँतिर लाग्यो ।
मङ्गलेबूढो गएपछि पन्डितकाजी आयो ।
“नमस्कार है नारानसर ! आरामै हुनुहुन्छ ?”, मुसुमुसु हाँस्दै सोध्यो । “नमस्कार पन्डितकाजी ! आरामै छु । अनि तपाईं नि ?”
“म पनि आरामै छु सर ! यहाँ फूलमायाको चप्पलमार्का चिसो चिया एक गिलास भुँडीमा हुलौं भनेर ।”
“हो हो काजीसाप, हुल्नुपर्छ ।”
“ज्यान छन्जेल न यस्तो तिर्सना बाँच्ने हो । मरेपछि त तिर्सना भन्ने राक्षेस पनि शरीरसँगै खरानी भैहाल्छ त !”
“हो त नि, भष्मिभूतश्य देहश्य पुनरागमनम् कुत ?”
“हो हो ! तब न नारानसर ! बुद्धिजीवीको छाँटै बेग्लै !”
पन्डितकाजी जोडजोडले हाँस्न थाल्यो । हाँस्दा उसको थोते मुख साह्रै कुरूप देखियो ।
कथाकार नारायण ढकाल । तस्बिरः रवि मानन्धर/नेपाल
बाँसजस्तो पातलो ज्यान भएको पन्डितकाजी बितेको बीस वर्षदेखि त्यो गाउँमा थियो । ऊ खानेपानी संस्थानको पिउन थियो । बीस वर्षअधि विश्व बैंकको आर्थिक सहायतामा पानी रिचार्ज गर्ने परियोजना गाउँमा आयो । परियोजनाको निम्ति जग्गा अधिग्रहण गरियो । सुरक्षक र पालोपहरामा बस्ने कर्मचारीका निम्ति भवन निर्माण गरियो । नदीबाट पानी तान्न यन्त्रहरूसहित पाइप ल्याएर जडान गरिए । भूमिगत जलसतहसम्म पानी पुर्‍याउन आठ इन्च गोलाइका पाइप गाडिए । यसरी करौडौं खर्च भयो । खानेपानी संस्थानको मान्यता थियो, उपत्यकाको भूमिगत जलसतहको पानी रित्तिंदै गएकोले भविष्यमा जमिन नभासियोस् भनेर यो परियोजना आएको हो । विश्व बैंकले पनि यो मान्यतालाई अनुमोदन गर्दै आर्थिक सहायतासहित वैतनिक कल्सल्ट्यान्सी सेवा प्रदान गरेको थियो । तर, परियोजना निर्माण पूर्ण भएपछि रिचार्ज सफल भएन । हुन सक्छ, परियोजना बिफल हुन्छ भन्ने कुरा संस्थान र विश्व बैंकलाई पहिल्यै थाहा थियो । जे होस्, परियोजना नचले पनि पन्डितकाजीचाहिं संस्थानको सम्पत्ति कुर्ने कार्यमा त्यहाँ रहिरह्यो ।
पन्डितकाजीको घर नुवाकोट जिल्लाको खरानीटार गाउँमा थियो । त्यहाँ उसका स्वास्नी र छोराछोरी थिए । गाउँमा रहँदा ऊ चौबीसै घन्टा रक्सीको नशामा लट्ठ रहन्थ्यो । केही काम गर्दैनथ्यो । घर परिवारका कसैले पनि उसलाई मन पराउँदैनथे । गाउँलेको आँखामा पनि ऊ साह्रै बदनाम थियो । उसको कमाइधमाइ केही थिएन, बरु उल्टै ऊ घरका सामान र स्वास्नीको गरगहना चोर्ने गथ्र्यो । घर र समाजले धेरै घृणा गरेपछि ऊ गाउँ त्यागेर राजधानी आयो । शुरुमा उसले यहाँ झन् दुःख पायो । कयौं रात सडकमा यात्रुहरूलाई बाटो काट्न बनाएका आकासेपुलमाथि सुत्यो । कयौं दिन भोकभोकै रह्यो । तर, एक दिन उसको भाग्यको ढोका उध्रियो, मानौं भाग्य उसलाई खोज्दै आएको थियो । महाबौद्धको गुरुवाचार्यको भट्टीमा रक्सी खान पसेको दिन नैकापको धुम्बे सार्कीसित उसको चिनजान र आत्मीयता बढ्यो । त्यसको भोलिपल्ट उसैले खानेपानी संस्थानमा लगेर पिउनको जागिर मिलाइदियो । धुम्बे सार्की पहिलेदेखि त्यहाँ पिउन थियो । त्यो घटनाले रक्सीरक्सीको प्रेम कति धेरै बलियो हुन्छ भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको थियो । यी कुरा यसअघि पन्डितकाजीले गल्पकारलाई रिठ्ठो नबिराई सुनाइसकेको थियो ।
पन्डितकाजी हरबखत रक्सीमा डुबे पनि उच्चकोटीको भलादमी थियो । चाँडै नै ऊ हाकिमहरूले मन पराउने पिउनहरूको सूचिमा अग्रस्थानमा दरियो । त्यस गाउँमा छ्यालब्याल पैसासहित विश्व बैंकको परियोजना आएपछि ऊ यता खटियो । उसलाई गाउँ खूबै मन पर्‍यो । आफ्नो गाउँमा जस्तो उसलाई घृणा गर्ने यहाँ कोही निक्लेनन् । बिग्रेको जँड्याहा भनेर कसैले हेप्दैनथ्यो । त्यसपछि ऊ कतै गएन । संस्थानमा जागिरे भएपछि ऊ एकपटक पनि घर गएन, न त उसलाई खोज्दै घरकाहरू यता आए । यसरी ऊ आफ्नो ठाउँबाट चङ्गाझैं काटिए पनि यता अर्को चङ्गामा जोडियो । उसलाई गाउँका सबैले पन्डितकाजी भनेर स्नेह गर्थे । घरमा मीठोमसिनु पाकेको बेला उसलाई सम्झिन्थे ।
मङ्गलेबुढो अलि टाढा पुगेपछि गल्पकारले पन्डितकाजीलाई सोध्यो, “यी बुढा यता नयाँ आ जस्ता छन् नि, हैन त काजी ?”
“काँ नयाँ हुनु ! ती यै बम्बैबुढीका लोग्ने त हुन् नि ! यिनीहरू दश वर्षदेखि यहाँ छन् ।”
“यिनका लोग्ने रे ! तर अघि उनले बूढीलाई बालमतलब गरेनन् त ?”
“पन्ध्र दिनजति भो छुट्टाछुट्टै बस्न थालेका । एक दिन दिनभरि झगडा गर्‍या थे । हाम्रै अपिसअगाडिको चौरमा लडाइँ भाथ्यो । मैले त छुट्याउनै सकिनँ । बूढाले लात्तैलात्ताले भकुरे । उनी लोग्नेमान्छे हुनुको घमण्डले चूर देखिन्थे । तर यी बूढी पनि के कमकी थिन् र ! जवाफमा उनले पनि लात्तैलात्ताले अनारीमा हान्दिइन् । बूढा थचक्कै बसे र आधा घन्टासम्म उठ्नै सकेनन् । त्यसपछि छुट्टिएका हुन् । अहिले एकअर्कालाई देख्नै सक्दैनन् । बूढी निदाएकोले, नत्र यहीं अघि हानाहान परिसक्थ्यो । अब यिनीहरू जोडिएलान्जस्तो छैन नारानसर ! तपाईं त कवि र लेखक, लौ भन्नोस्त यो मानिस भन्ने जनावर किन यति कठोर र निष्ठुरी हुन्छ ?”
के जवाफ दियो भने पन्डितकाजीभित्रको दार्शनिक सन्तुष्ट हुन्छ होला ? गल्पकार सोच्न थाल्यो । दुविधाले ऊ छटपटियो ।
“बुढेसकालमा के रमिता गरेका त यस्तो ? के निउँमा झगडा भएछ ?”, गल्पकारले पन्डितकाजीको प्रश्न छलेर उल्टै प्रश्न गर्‍यो ।
“बुढा भन्थे, बुढी हल्दारसित सुती, अब यस्ती रन्डीसित बस्न सक्दिनँ ! अनि यिनी भन्थिन्, बालुवा झिक्न सजिलो पर्छ भनेर पहिले सुत्न पठाम्ने अनि उल्टै निउँ खोज्ने ? खोइ कुरो के थ्यो भगवान् जानून् नारानसर !”
“पुलिससित लफडा पर्‍या थ्यो र ?”
“पुलिस भन्दैमा सबै एकै हुन्नन् सर ! एउटा जँड्या हल्दार सरुवा भर याँ आ छ । त्यो आएसि यस्ता काण्ड मच्च्या छन् । हुन त म पनि दिनमा बाह्र घन्टा रक्सी खान्छु तर मैले अहिलेसम्म यो गाउँका कुनै आइमाईलाई नराम्रो आँखाले हेर्‍या छैन । छ भन्नोस् त नारानसर, तपाईं त याँको रैथाने ?”
फेरि गल्पकार पन्डितकाजीको अर्को प्रश्नले अलमलियो ।
“अचेल यी बूढीलाई कसैले काममा बोलाउन्नन् । हल्दारसित सुतेको काण्डपछि गाउँमा यिनलाई समर्थन गर्ने कोइ छैनन् । अचेल यिनको काम बालुवा चोर्नु र डनहरूलाई बेच्नु हो । ती बालुवाका अवैध व्यापारीहरूलाई त केइ कारबाइ हुन्न । कारबाइ त यस्तै निमुखालाई हुने न हो । आआफ्नु भाग्गेको कुरा ! यी बूढीले जति कसले दुःख पायो होला र जिन्दगीमा ! यिनको घर पनि नुवाकोट हो । मेरोभन्दा एक बिहानको बाटो टाढा पर्छ । लेकतिरकी हुन् । जवान छँदा यिनी आफ्नै इच्छाले बम्बैमा कोठीमा बस्न गकी रे भन्थे । त्यसैले यिनको नाम बम्बैकुमारी बनेछ । शायद बम्बै जानुअघि अर्कै नाम हुँदो हो । हामी केटकेटी हुँदा हाम्रो गाउँभन्दा माथितिर त्यस्तो चलन थियो, आफ्नै इच्छाले बम्बै जाने । यिनीहरू ज्यादै गरिब थिए । गरिबीमा पिठो गिलो भन्छन् नि ! आमाबाबु रोगी । घरमा अर्को भनेको सानो पिलन्धरे एउटा भाइमात्र थ्यो । यिनलाई गाउँकै अर्की भुक्तभोगी बूढीले बम्बै लेर गइछ । बीस वर्षसम्म कोठीमा बसेर पैसा कमाएर घरमा पठाइछन् । भाइ ठूलो भएछ । स्वास्नी ल्याएछ । साउको रिन तिरेछ । घरमा जस्ता हालेछ । खेत किनेछ । यिनी बूढी हुन लागेपछि घर फर्किछन् । याँ आउँदा बाआमा मरिसकेका थिए । यता केही दिन त भाइले पालेछ । पछिपछि बुहारीले हेला गर्न थालिछ । भाइ पनि उनको निम्ति नबोल्ने भएछ । ल हेर्नोस्त सर, कस्तो स्वार्थी संसार ? उनकै दुःखले भाइ धनी भयो तर गुन देखेन । बुहारीले खाने बेलामा भाग लाउनै छोडिछ । केइ बोल्यो कि, ए बेस्से बोल्छेस् भनेर थर्काउन थालिछ ! यता फर्कंदा पनि बेस्से, उता फर्कंदा पनि बेस्से । त्यसपछि उनी आफ्नो थलो त्यागेर यता आइछन् । अघिका मङगलेबूढालाई यैं आर भेटेकी हुन् यिन्ले ।”
पन्डितकाजी एकछिन रोकियो । गल्पकार उसको कथावाचन शैलीमा मन्त्रमुग्ध थियो ।
पन्डितकाजीले फेरि भन्यो, “बूढाको कथा पनि त्यस्तै । छोराबुहारीले निकालेका । यहाँ आएर भेट भएपछि पैलापैला त खूप मिलेर बस्या थे । परेवाका जोडीझै सधैं सँगसँगै हुन्थे । काम पाए काम गर्थे, नपाए खोलाबाट बालुवा झिक्थे । बूढाबूढीको जीवन दुःखसुख चल्या थ्यो तर गाउँको अस्थायी चौकीमा जँड्या हल्दार आएसि त यिनेरुको बिजोगै पो भो त सर !”
“जँड्याहा हल्दार ?”
“फिलिममा झैं जीवनमा पनि त्यस्ता खलनायक हुँदा रहेछन् नारानसर । भो अब त्यो शैतानको कुरा नगरम् । हाम्रो व्यवस्था पनि कस्तो ? बद्मासलाई मात्र ठाउँ मिल्छ ।”
“कथा त गज्जबैको रहेछ । अनि पन्डितकाजीको कथावाचन शैली पनि अद्भुत रहेछ !”, गल्पकारले भन्यो ।
“हत्तेरी नारानसर ! अब मलाई जिस्काउन पो थाल्नु भो ! ल म पनि कस्तो लठुवा रेछु ? बेफ्वाँकमा अर्काको कुरा काटेर बस्ने ! यस्ले के फैदा ? ए फूलमाया ! मेरो चिसोचिया ख्वै त ?”
त्यसपछि पन्डितकाजीले एक सासमा दुई गिलास ठर्रा सुइँक्यायो र नमिठो मुख पार्दै त्यहाबाट हिंड्यो । शायद मङ्गलेबूढा र बम्बैबुढीको विषयमा यत्रो लामो गफ दिएकोमा उसलाई पश्चातापको आगोले पोल्न थालेको थियो ।
त्यस बेलासम्म भट्टीपसलको बाटो भएर एउटा पनि खर्पने आएन । अरू केहीबेर खर्पनेलाई कुर्ने नाममा गल्पकारले अर्को एक कप चिया थप्ने सोच बनायो र फूलमाया थसुल्लीलाई भन्यो, “यसपटक कालो र थोरै चिनी हालेको है नानी !”
उसले मुन्टो हल्लाई ।
“आज कुनै चाडबाड त परेन ? नत्र यस बेलासम्म त एउटा न एउटा आइसक्थ्यो ।”, आफूभित्रको हतास भावलाई जित्न गल्पकार करायो ।
फूलमाया गल्पकारको तनावमा तटस्थ देखिई । ऊ चियाको भाँडो बसालेर जुठा भाँडा पखाल्न चौकीतिर लागी । त्यसै बेला कतारमा काम गर्न गएको उसको लोग्नेले फेसबुकको म्यासेन्जरबाट भिडियो च्याट गर्‍यो । ऊ उभिईउभिई च्याटमा व्यस्त भई ।
खर्पने नआएकोले गल्पकार साह्रै रन्थनियो । ऊ त्यहाँबाट उठ्यो । पाइन्टको पछिल्लो खल्तीबाट वालेट निकाल्यो । अनि दुई कप चियाको पच्चीस रुपैयाँ फूलमायाको हातमा थमायो र अँध्यारो मुख लाउँदै कच्ची सडकमा निस्कियो ।
बिहानको सूर्य अझै पूर्वी आकाशको बादलपारि थियो । यता भट्टीपसलको स्टुलमा बसेकी बम्बैबुढी अद्यापि उही गति र लयमा उमिरहेकी थिई ।
।। २०१७ ।।
(बुकहिलबाट प्रकाशोन्मुख नारायण ढकालको सातौँ कथासंग्रह 'तमस' बाट ।)
भोको बिहान बोकेर, सँधै सँधै उदाइरहने, मेरा हत्केलाका ठेलाहरू हेर, लेख्न सक्छौ तिमी, मेरा अ...
पोस्टमार्टम स्थलबाट सूर्यबहादुर तामाङको आग्रह
जुत्ताको तलुवामुनि, सदियौँदेखि कुल्चिएका छौ तिमीले - मेरो अस्तित्व । (कविता)...
म निसास्सिइरहेको छु
मैले तिमीलाई गाउँ गाउँ अनि दलित, गरिबका बस्ती बस्तीमा आउ भनेको थिएँ । तर तिमी त सहर-बजारका...
गाउँभरि युवाहरूको अभावमा खेत बाँझो देख्न नसकी, घरका हल गोरुसँगै, आफ्नो पनि हत्या गर्ने वृद...
एक बौद्धिकलाई प्रश्न
मेरो अन्त्यको अर्थहीन विलम्बबीच म सोचमग्न छु- अविलम्ब जागृत हुनुपर्ने मानिस कहाँ छ ? (कवित...
सृष्टिमा अन्तिम सेतो जिराफ
सत्तालाई सबैभन्दा बढी झोँक चल्छ, जब चिच्चाउन थाल्छ कोही नाङ्गो मानिस... ...
केही बीउ कविताहरू